Learning How to Learn – Set Kyar Wa Lar – Medium
ABC | Developer at http://warmae.com Writer at ✍️http://PHPMyanmar.org . Maker of 👨‍💻 http://myanmardevjobs.com and http://ponekyimel.com Wanna be DataScience
“A little boy holdingabook withasurprised expression on his face” by Ben White on Unsplash
သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ အသစ်တစ်ခုခုလေ့လာချင်တာ ကျွန်တာ့်စိတ်ကူးအိမ်မက်ပါ။ အမြဲတမ်းလည်းလေ့လာဖို့လုပ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဖြစ်နေကြအတိုင်း procrastination ကအနိုင်ယူသွားပြီး အမြဲတမ်းမပြီးဆုံးပါဘူး။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ ဒါမျိုးမဖြစ်ကဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လေ့လာဖို့လုပ်ပါတယ်။ ဘာလေ့လာမလဲဆိုပြီးမေးတော့ programmmer တို့ထုံးစံအတိုင်း လေ့လာစရာတွေကအတော်လေးကိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ သင်္ကြန် Plan ကတော့ Course နှစ်ခုနဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပြီးဖို့ဆိုပြီးလုပ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသိအစ်ကိုတစ်ယောက် (ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုံးက Senior အစ်ကိုတစ်ယောက်) ကစမ်းချောင်းမှာနေတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းစမ်းချောင်းမှာနေတယ်။ တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတွေ့ဖြစ်တယ်။ တွေ့တော့ Programmer ထုံးစံအတိုင်းဘာတွေလုပ်နေလဲ ဘာတွေလ့လာနေလဲ ကျွန်တော်လည်းဘာတွေလေ့လာသင့်လည်း ဘာညာမေးရင်း အောက်က Ted Talk လေးကိုအဲ့အစ်ကိုက share တော့သေချာကြည့်မိပါတယ်။ Talk ကြည့်ပြီးဟိုရှာဒီရှာလုပ်လိုက်တော့ Courseara က Learning How to Learn က Dr. Barbara Oakley သင်တာမှန်းသိလိုက်ပြီး Course တစ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားတာပါ။
ကျွန်တော်က Dr. Barbara Oakley ရဲ့ Ted Talk ကိုကြည့်ပြီး inspire ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ စကြည့်ကတည်းက သေချာဂရုတစ်စိုက်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝပျင်းမသွားပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကျင့်က online course ဘဲဖြစ်ဖြစ် screen cast ဘဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရင် speed က 1.5 လောက်ထားကြည့်ပါတယ်။ အရမ်းမြန်မြန်ပြောတက်တဲ့သူဆို 1.2/5 လာက်ထားကြည့်ပါတယ်။ ဒီ course ကတော့အရမ်းစိတ်ဝင်စားတော့ ဘေးမှာစာအုပ်တစ်အုပ်ချပြီး ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မယ့်ဟာ မှတ်မိသင်တဲ့ဟာလို့ထင်ရင် pause လုပ်ပြီးချရေးထားပါတယ်။ သင်္ကြန်အကျနေ့မှစလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုနေ့ကနေမကောင်းဖြစ်နေလို့။ အတက်နေ့မှာပြီးပါတယ်။ Optional reading article တွေကလည်းတော်တော်လေးဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ အရမ်းခက်ခဲတဲ့ course တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လေ့လာမှူက effective မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ရင်ဒီ course ကိုတက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဆရာ/ဆရာမ ဆိုရင်လည်းတက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Course ပြီးသွားတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ
ကျွန်တော်အရင်ကလည်း MOOCs တွေတက်ဘူးပါတယ်။ တစ်ခုမှ အပြီးဆုံးထိမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ Course ကပထမဆုံးပါ။ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကို တစ်ကယ့်ကိုသေသေချာချာ စိတ်ထဲထိရောက်အောင် ဖြစ်စေတဲ့ Course လို့ခံစားရပါတယ်။
ဒီ Course ပြီးသွားတော့ စိတ်ထဲမှာနောက်ဘာလေ့လာလေ့လာ အသုံးဝင်မယ့်အချက်တွေအများကြီးရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ဒါကြောင့်စာဖတ်သူလည်း Course ကိုတက်ကြည့်သင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာအားလုံးဒီထက်ပိုပိုပြီးလေ့လာနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း…
Like what you read? Give Set Kyar Wa Lararound of applause.
Never missastory from Set Kyar Wa Lar, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Set Kyar Wa Lar